Sidee Loogu Dhaqaajiyaa Muuqaalka Madaw ee Telegram | Androidsis
Sida loo kiciyo Mode Dark in Telegram
telegraam waxay noqotay codsi muhiim ah noloshiisa, tanina waa koritaanka ay iyaguba horey ujireen in ka badan 400 milyan oo qof kuwaas oo si firfircoon u isticmaala. Way ka badan tahay wax kale, waa qalab aad u awood badan oo leh asturnaan weyn marka la barbar dhigo barnaamijyada kale ee farriimaha la isugu diro.
Waxaa jira horumariyeyaal badan oo hirgeliyey Muuqaalka Madow ee barnaamijyadooda, barnaamijka ayaa sidoo kale ku sameeya illaa laba ikhtiyaar: Waxay bixisaa hab madow iyo mid kale oo loo yaqaan 'Night' Labadan waxa kale oo jira qaabka caadiga ah, qaabka Maalinta iyo Arctic, tan dambe oo leh iftiin buluug iftiin leh.
1 Firfircoon Muuqaalka Madoow
2 Telegram ayaa bixin doonta wicitaano fiidiyoow ah sanadkan
Firfircoon Muuqaalka Madoow
Way fududahay inaad karti u yeelato, sida oo kale Xaaladda Madaw ee WhatsApp waa dhowr tallaabo oo yar illaa aad ka gaarto xulashada hawlgelinta. Ku Mode ModeSida la ogsoon yahay, si ballaaran ayaa loo adeegsadaa maxaa yeelay isticmaalka korontada ee taleefannada ayaa si weyn loo dhimay.
Tallaabada ugu horreysa waa inaad tagtaa ikhtiyaarka "Dejinta", xaaladdan waa inaad gujisaa saddexda xarig ee jiifka ah ee ku yaal bidixda kore. Marka xulashooyinka la soo bandhigo dhagsii «Settings» -> Chats -> waxaadna arki doontaa ikhtiyaarka «Mawduuca», halkan waxaad ku dooran kartaa waxyaabo kale oo kala duwan, kiiskan dooro "Madow".
Markaad dooratay Habka mugdiga ahi wuxuu noqon doonaa mid deg deg ah, in kastoo xaaladdan aan ku sameyn karno wax ka badal badan haddii aan rabno midab yar oo midab leh oo ku yaal meel ka hooseysa qaab kasta. Asalka kiiskan sidoo kale wuu isbadali doonaa iyadoo kuxiran midabka aad doorato, waad badali kartaa markasta oo aad rabto.
Telegram ayaa bixin doonta wicitaano fiidiyoow ah sanadkan
Barnaamijka Telegram ma bixiyo wicitaanno fiidiyoow ah, laakiin taasi ayaa hagaajin doona sanadkan adoo balan qaadaya astaantan awooda badan kahor dhamaadka sanadka 2020. Hadaad rabto inaad wicitaan fiidiyo ah ku sameyso Telegram waxaad leedahay ee casharkan iyada oo lagu fulinayo barnaamijka Vidogram, oo ah ikhtiyaar muhiim ah haddii aad taqaanid farriintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo kiciyo Mode Dark in Telegram
Tronsmart waxay soo saareysaa samaacadaha dhagaha ee ugu horeeya iyagoo wata nidaam nadiifin ah oo ka dhan ah coronavirus
Ku xakamee digniinta mobiil kasta badhamada mugga